Huawei Watch GT2 iyo GT2e waa la cusbooneysiiyay si aad sawiro ula qaadatid iyaga | Androidsis
Huawei Watch GT2 iyo GT2 Lite ayaa la cusbooneysiiyay si ay u noqdaan xulafada ugu fiican kamaradda mobilada
Mid ka mid ah beddelka ugu wanaagsan ee Apple Watch waa la amaanay Huawei Watch GT2. Haa, soo saaraha Aasiya wuxuu leeyahay noocyo badan oo la gashado oo aan waxba ka hinaasin kuwa la tartamaya. Iyo, sidaan aragnay, calanka ay hadda ku leedahay suuqa smartwatch wuxuu helayaa cusbooneysi aad u xiiso badan.
Haa, waa wax iska caadi ah shirkadda Huawei inay cusbooneysiiso qoyskeeda saacadaha casriga ah si ku saleysan cadaalad ah. Dhawaan, ayaa Huawei Watch GT2 helay mitirka oksijiinta dhiigga. Oo hadda waa waqtigii cusboonaysiinta cusub, taas oo sidoo kale waxaad heli doontaa Watch GT2e taasina waxay kuu oggolaaneysaa inaad wax badan ka hesho kamaradda taleefankaaga gacanta.
Hadda Huawei Watch GT2 iyo GT2e ayaa sawirro kaa qaadi doona
Sidan ayaa ah nooca 1.02.18 wuxuu yimaadaa Huawei Watch GT2 iyo GTs2, waana mid ka mid ah kuwa ugu xiisaha badan, badanaa maxaa yeelay waxaad u isticmaali kartaa smartwatch-kaaga inaad ku xakameyso kamaradda moobiilka meel fog. Xaqiiqdii, adoo ka shaqeynaya shaqadan cusub midkood labada saacadood, dadka isticmaala waxay awoodi doonaan inay sawir ka qaadaan si fudud iyagoo taabanaya astaanta kamaradda shaashadda. Hadda, waxay u oggolaaneysaa oo keliya qaadashada sawirro, iyada oo aan awood u lahayn inay gasho xulashooyinka qaabeynta, laakiin waxaan arki doonnaa haddii ay ku dari doonaan qalab badan mustaqbalka.
Ku sii wadida wararka in cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Huawei Watch GT2 ay keento, in la yiraahdo waxaan sidoo kale yeelan doonnaa isboorti cusub, saacaddan casriga ah oo awood u leh inay ogaato illaa 100 astaamaha tababarka cusub oo ay ku jiraan qoob-ka-ciyaarka caloosha, yoga iyo fursado badan. Mabda 'ahaan, cusbooneysiintan ayaa hadda la geeyay Boqortooyada Midowday, iyo tan GT2e ee Jamhuuriyadda Czech, markaa waan sugi karnaa inay ku soo degto dalkeenna toddobaadyada soo socda.
Soo iibso Huawei Watch GT2
Adoo tixgelinaya inaad hadda iibsan kartid Huawei Watch GT2 qiimo dhimis dhan 50 euro, waa mid ka mid ah gorgortanka ay tahay inaadan ka maqnaan. Inbadan, markaad aragto hagaajinta ku imaan doonta cusbooneysiinteeda ugu dambeysay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Smartwatch » Huawei Watch GT2 iyo GT2 Lite ayaa la cusbooneysiiyay si ay u noqdaan xulafada ugu fiican kamaradda mobilada
Uguyaraan GT2, shaashadda qaybaha ayaa wali ah mid maran oo aan iyaga ku xareynin, taas oo ay tahay inay ku eegaan dhibaatada ay cusboonaysiintaani leedahay.
Cusbooneysiintii ugu dambeysay ee Galaxy A50s waxay kuu oggolaaneysaa inaad duubto shaashadda